वि.सं. २०७७ भाद्र २८ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर १३ तारिख) आइतबार : ॐ सूर्य देवाय नमः - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज धर्म/संस्कृति वि.सं. २०७७ भाद्र २८ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर १३ तारिख) आइतबार :...
वि.सं. २०७७ भाद्र २८ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर १३ तारिख) आइतबार : ॐ सूर्य देवाय नमः
२८ भाद्र २०७७, आईतवार १०:०३
मेष – व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सामाजिक नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुहोला । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । हास–विलासमा रुचि बढ्ला । मान सम्मानमा ध्यान राख्नुपर्ला । तथापि घरपरिवारको स्थिति अनुकूलै रहला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । विकासको बाटो देखापर्ला । सुख–सुविधाको वस्तुमा खर्च बढ्नेछ । लोभलालचमा नपर्दा उचित रहला । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नु बेस रहला । भूलचुक तथा लापर्वाही हुनुबाट बच्नुहोला, अन्यथा भोलि पछुतोमा पर्नुपर्नेछ ।
वृष – अन्नधन बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । उधारो लगानी लगाइएको धन उठ्नेछ । रोकिएको काम बन्नेछ र नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । विकासको पथ बलियो बन्ने छ । व्यापारिक क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ सफलता मिल्नेछ । पारिवारिक सुखशान्ति पनि प्राप्त होला । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । समयले साथ दिनेछ । विजयश्री प्राप्त होला । सुख–सुविधाको बस्तु बढ्नेछ । हरेक प्रकारले उत्थान होला ।
कर्कट – ग्रहगोचर भाग्यवर्धक छ । इष्टमित सन्तान सुख बढ्नेछ । शुभ कार्यमा सफलता मिल्नुसँगै विकासको काम पनि बन्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काममा रुचि बढ्नुसँगै यात्रामा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । मान सम्मान बढ्नुको साथै ख्याति पनि फैलिने छ । आरोग्यता बढ्नेछ । विकासको नयाँ नयाँ बाटो देखापर्ला । सुखशान्ति बढ्नेछ । हरेक प्रकारले कल्याणले बाटोमा लागि पर्नुहुनेछ ।
सिंह – कुनै प्रकारको जोखिममा नलाग्दा उचित हुनेछ । स्वास्थयमा सचेत रहनु पर्ला । नियम कानुनलाई उपेक्षा गर्नु उचित हुनेछैन । योजना र बजेट बनाई कार्य गर्नु बेस रहला । उच्चाधिकारीहरूसँगको व्यवहारमा नम्रता राख्नु बेस रहला । चोरी ठगी विश्वासघातीप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । विवाद आदिप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । भागदौड व्यस्तता चलिरहनेछ ।
कन्या – सुख–समृद्धि धन यश बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्नुको साथै नयाँ कार्यमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ । साझेदारीको कार्य बन्नुको साथै नयाँ–नयाँ कार्यमा पनि प्रगतिको बाटो बलियो बन्ने छ । जीवनसाथीको सुख सहयोग पाउनुहुनेछ । रस रागमा आकर्षण गर्नेछ । मिठो भोजन पाउनुहुनेछ । मान प्रशंसा होला । ख्याती फैलिनेछ । सुख–शान्ति बढ्ला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखन तथा प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ ।
वृश्चिक – आजको समय प्रेमको क्षेत्रमा सफलता पाउनको लागि अत्यन्तै अनुकूल छ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । इष्टमित्र सन्तान आदिद्वारा सहयोग मिल्नेछ । कला साहित्य संगीत गीत रसरागसित सम्बन्धित कार्यमा सफल रहनुहुनेछ । रचनात्मक र कलात्मक कार्यमा सफलताको साथै साथीभाइबीच आमोद प्रमोदमा हुनेछ । आनन्द बढ्नेछ । सुख शान्तिमा वृद्धि होला । प्रेमपात्रको साथ पाइनेछ ।
धनु – देखापरेको समस्याको समाधान मिल्नेछ । खर्च बढ्नेछ । यात्रा हुनेछ । भागदौड र व्यस्तता बढ्नेछ । अरूको भरमा बस्नु उचित हुनेछैन । आफ्नै बल विवेकले काम गर्नु बेस रहला । विवाद आदिमा पर्नु उचित हुने छैन । ठूलो रकमको लगानीको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कागजपत्र माथि हस्ताक्षर गर्दा सचेत रहनुपर्नेछ । आँखा चिम्लेर अरुमाथि भर पर्नु उचित हुनेछैन ।
अघिको समचार भाडावाललाई घरधनीको सहानुभूति होइन, आग्लो प्रहारबाट हत्या, हत्यारा प्रहरी खोरमा
अर्को समचार विदेशी भूमिमा कूल संक्रमित नेपाली मध्ये ७० प्रतिशत निको, हालसम्म २ सय ४३ को निधन